Budata Ivive APK maka gam akporo [Emelitere 2022] - Luso Gamer
Budata Ivive APK maka gam akporo [Emelitere 2022]
Ose foto eserese na ndu mmadu. Site na ịchekwa akụkọ maka ndị na-esote ya na akara nke ncheta na icheta ma rejoiceụrịa ọ theụ n'oge gara aga. Mana Ivive APK na-ewere egwuregwu ahụ n'ogo ọhụụ.
Ihe osise na onyonyo na –ewere ihe di iche maka ndi mmadu di iche iche. Ọbụna maka mmadụ ọ bụla, ha na-enye echiche dị iche n'oge ọ bụla elere ha. Mgbe ụfọdụ ha na-enyere anyị aka ịchikọta ncheta anyị, oge ụfọdụ ha bụ naanị isi mmalite nke anyị ozi, ha na-akọ akụkọ, na-ekerịta oge, ma na-eburu anyị ihe ndị gara aga.
Yabụ, na oge a nke ọgụgụ isi na eziokwu na-enyere mmadụ aka, ọ na-ahapụ ịgbanwe ihe ochie na akụ ndị a ka ọ bụrụ ihe na-agbada. Ọ bụrụ n’ịchọrọ, nweta Ivive App maka ekwentị gam akporo ekwentị ma ọ bụ mbadamba gị n'efu na ibe a.
Gini bu Emmanuel di?
Ivive bụ ngwaọrụ nke na-enye ọhụụ na ịkọwapụta ihe onyonyo anyị na-ele anya. Ọ na - eme ihe ngosi a na - akpaghị aka site na iji eziokwu emeela emepe emepe. Nke a na-emepụta ọhụụ dị egwu na mmetụta na ihe onyonyo a, site na itinye ihe ịtụnanya.
Yabụ k’anyị enyela ihe onyonyo anyị ndụ. Mgbe ọ bụla anyị lere ha anya, ha wepụrụ anyị karịa ihe anyị nwere ike iche maka iji ụbụrụ anyị. Mgbe anyị jiri echiche anyị mee ihe, ka anyị kwuo eziokwu, o nwere oke. Ọ bụghị anyị niile bụ Picassos ma ọ bụ Van Goghs.
Nke a na-ekwu. Yabụ kedu nke anyị enweghị ike ịdị echiche dịka onye edemede Avatars ma ọ bụ ndị ama ama ama. Anyị nwere ike iji teknụzụ mee nke ahụ maka anyị.
Aha ngwugwu bie
Achọrọ gam akporo 4.3 na n'elu
Y’oburu na inwetacha ihe banyere eziokwu o buru na inwere ike imata etu o siri gbasa ndu anyi ma hu uwa.
Ivive App nwere ike niile a chọrọ iji were ike ya rụọ ọrụ ọfụma karịa ikike mmadụ. Y’oburu na anyi edoghi anya ihe anyi n’ekwu. Lelee ngwa ahụ n'onwe gị site na iji ya na ngwaọrụ gam akporo gị.
Ahụmịhe ụwa nke foto na onyonyo ọhụụ. Hụ ya na ngagharị ma na-e lifeomi ndụ n'ụzọ ọhụụ, dị egwu ma na-atụghị anya ya.
Ozugbo i jiri omarị ọkacha mmasị gị mepụta ihe nkiri dị egwu, ọ bụ oge isoro ndị enyi gị ma ọ bụ na mgbasa ozi mgbasa ozi wee mee ka ụmụazụ gị nwee mmasị.
Etu esi ebudata Ivive APK?
Iji nweta ngwa a dị egwu na ama gị naanị soro usoro ndị a dị n'okpuru.
Nke mbu, gaa na njikọ nbudata nke dị n'okpuru wee pịa Download mmanya
Gaa na ebe nchekwa ngwaọrụ ozugbo nbudata usoro ahụ zuru ma chọta faịlụ ahụ.
Kpatụ ya ka imalite nrụnye
Kwado nhọrọ ngwaọrụ amaghi na ntọala ekwentị
Pịa ugboro ole na ole ka ị nọrọ.
Can nwere ike ịchọta mpaghara Ivive na ihuenyo ngwa ma pịa imepe ya. Ugbu a ị nwere ike itinye onyonyo ndị ahụ ma hụ anwansi. Otu ihe ị ga-elebara anya bụ na ọ gaghị arụ ọrụ na foto niile. Orụ ọrụ a dị naanị n’onyinyo nke ngwa ga-agwa gị nke ngosipụta akara ngosi.
Ihe yiri gị
Ngwa nke Ivive bụ ụzọ dị egwu iji lee anya onyogho n'ụzọ ọhụụ. Site n'enyemaka nke eziokwu dị ebube, ọ na-enye gị ahụmịhe ọhụụ dị egwu. Iji nwee obi ụtọ na ngwa a pụrụ iche na perks naanị nweta faịlụ ahụ site na ịme ọpịpị njikọ nbudata maka gam akporo gị
Categories Entertainment, Apps Tags Ekeresimesi APK, Ngwa Ivive Mail igodo
Nbudata ihe nkiri maka gam akporo [Ntụrụndụ 2022]
Nka na ụzụ Eze VM Download 2022 maka gam akporo [PUBG Virtual]